Qeerroo, Qabsoo Itti Fufaa! | QEERROO
“Barataa unvarsiitii kan ture yeroo darbe mana hidhaa Qaallittii bakka ciisicha isaa keessatti kan rasaasaan rukutame Barataa Alamaayyoo Garbaa Hurruubaa Mudde 9, 2005 Hospitaa Xiqur Anbessa keessatti Boqate. Alamaayyon erga rukutamee booda waldhaansa dhoowwatanii kan ajjeesan yoo ta`u wayyaanonni gocha hamaa kana erga raawwatanii booda, ‘hidhamtoonni baduudhaaf yoo yaalii godhan rukutaman,’ jechuudhaan oduu kijibaa dabarsanii turan.
Haata’uutii, dhugaan jiru, Alamaayyon Mana hidhaa Qaallittii keessatti, bakka ciisicha isaa irratti rasaasa agaaziin rukutamee, wal’aansas dhabee akka du’u godhame. Wayyaanonni kan kan godhan immoo, namni kun yoo fayyee jiraate ragaa nutti ta`a jedhanii beekaatuma waldhaansa dhoowwatanii akka ajjeesan odeessi mana hidhaa Qaallitti keessaa nu gahe saaxilee jira. Otuu wal’aansa gahaa argatee garuu, madaan isaa dabarsee kan du`aaf isa laatuu miti jechuun hiriyyoonni isaa SBOf dhaamanii jiru.”
Kun oduu gaddisiisaa karaa Sagalee bilisummaa Oromoo gaafa Muddee 11, 2005 (Oromia) qilleensa irra oolee dha. Oduun kun amma illee http://www.oromoliberationfront.org/News/Barataa_Alamaayyoo.htm irraa kan dubbifamuu dha. Dhugaan akkanaa yaa turu malee guyyuu ifa bahaa adeema. Diinni hagam dhoksaan qeeroo egeree lafa irraa balleessuu irratti hojjatus, dhugaan akka dhokatetti hin hafu.
Dhimma mata duree kanaa irratti gochaa diinni saba keenya irratti dalagaa jirtu, keessattu kan qeerroo irratti raawwatamaa jiru mara tarreessuun hin danda’amu. Akeekni barruu kanaa diddaa Qeerroo yeroo ammaaa Oromiyaa keessatti finiinaa jiruun kan walqabate, galmee seenaa keessaa gootummaa Qeerroo keenyaa fi gochaa diinummaa kaayyoo qeerroo dhaamsuuf diinaan raawwatamaa jiru Qeerroo keenya har’aaf akka mil’uutti ibsuu dha.
Suuraan kun kan barataa Alamaayoo Garbaa ti; suuraan tun har’as akkuma kaleessaatti, sabboonummaa Qeerroo oromoo kana akka calaqisetti jira. Alamaayyoon garuu seenaa bara baraan jiraatu dhaloota keenyaaf kaayee darbeera. Maqaan isaa fi suuraan isaa garuu galmee seenaa Sabboontotaa keessatti qalama hin banneen akka galmeeffametti oggayyuu mul’ataa jira.
Har’a Qeerroon Oromoo waan ittiin boonan keessaa tokko jaatanii bilisummaa qeerroon akka Alamaayyoo fa’aa dalaganiin ta’a. Alamaayyoon fa’aa akkuma abbootii keenyaa garbummaaf hin jilbeeffanne. Alamaayyoon akka warra kaanii miila lamaan hin adeemu ture; miilli isaa tokko ijoollummaa isaatti jalaa waan miidhameef kiraanchiidhaan deemaa baratee sadarkaa Yunivarsitii gahe. Miilli isaa tokko miidhamus, qalbii fi yaadni isaa garuu guutuu fi jabaa ture.
Alamaayyoonnama kutataa, sabboonaa fi qaroo ture.”Alamaayyon guyyaa tokko illee gochaa fi doorsisa diinaaf hin jilbeeffanne, Yeroo mara xiiqii fi kutannoon hojjata ture; yeroo lukkeen diinaa isa hordofaa turanittis otuu hin sodaanne hojjataa ture.” Akka hiriyooti isaa ragaa bahanitti, Alamaayyoon, yeroo mara nama kutannoon kaayyoo bilisummaa galmaan gahuu fi dirqama itti kenname milkeessuuf hojjataa ture.
Alamaayoon otuu Yuniversity Finfinnee keessaa baratuu bara 2004 baatii Caamsaa keessa Mootummaa Wayyaaneen hidhame. Sababiin hidhaa isaatii hiriira Waldaan Macaa fi Tuullamaa dhimma Fifinnee ilaalchisee hiriira mormii qindeesseen kan walqabate ture. Namni kun nama qaami isaa tokko hirruu haa tahu malee nama qalbiin isaa guutuu fi Oromummaa isaaf falmuudha. Qalbii, sammuu, murannoo, jabina fi hamilee guutuu qabsoo Oromoof qabachuu isaatu rasaasa diinaan dararama meeqa booda isa ajjeesise. Otuu lubbuun jiraateera tahee gaaf tokko yoo seerri ija seeraan ilaalame yakka itti sobaan himatame irraa dhugaan mo`ee bahu waan beekaniif tarkaanffii jibbiinsa hamaa fi gara-jabinaan guutame irratti fudhatan.
Alamaayyoon mana hidhaa Qaallittiitti, Zoonii 2, mana lakkoobsa 3 keessatti hidhamee ture. Manni kun ammoo qorqorroo irraa kan hojjetame waan ta‘eef wayyaanoti bakka inni ciisu durumaanuu waan beekaniif qiyyaafatanii karaa ciisicha isaatii rasaasa heedduu walitti aansuun itti dhukaasuudhaan ture kan galaafatan. Oromooti mana hidhaa Qaallitti turan Orommota haaraa hidhamanitti uraa raasaasi ittii galee Alamaayyoo ajjeese seenaadhaaf waliif agarssisu. Warri isa waliin hidhaman rakkina meeqa booda yommuu hidhaatii hiikaman barataa Alamaayoo Garbaa fi ka biroo ofbiraa lubbuun dhabuu isaaniitti ni gaddu. Sabi Oromoo mara keessaa seenaan sabboonaa fi goota kanaaf ka biroo hinbadu.
Dhaamsa Barataa Alamaayyoo Garbaa
Barataa Yuniversitii Finfinnee ka turee fi mana hidhaa Qaallitti keessatti Sadaasa bultii 03, 2005 rasaasa wayyaaneen bakka ciisutti rukutamee kan mana hidhaatti wareegame Alamayoo Garbaa dhaamsa armaan gadii Oromoota maraaf dhaamee darbe.Dhaamsi isaa kunis otuu lubbuun jiruu waan inni katabee iccitiin ol kaa`e keessaa fi yeroo lubbuun keessaa bahaa turtetti waan inni dhaammate irraa kan fuudhamedha. Dhaamsichis akka armaan gadiitti argamudha:
“Egaa obboleewwan koo hogguun kana barreessu ani afaan boolla du`aa irra taa`eeni. Saa`aa fi daqiiqaa itti lubbuun koo na keessaa harattun eegaa jira. Namni du`a jaallatu hinjiru. Namni du`a oolus hinjiru. Ofumaa sodaanna malee garuu isheen hinhaftu. Yeroo ishee eeggattee bifuma fedheenuu ni dhufti. Kanaaf, du`a jalaa hafna jettanii saba keessan, jaallan keessanii fi fira keessan irratti cubbuu hindalaginaa.
Du`i koo akka armaan gadiin natti dhufte. Otuun guyyaa ishee dursee beekeellee waan hedduun seenaaf olkaa`an ture. Amma garuu sagalee koo, dhaamsa koo dhumaan isin warra lubbuun jirtaniif dhaama.
Ani nama qaama hir`u garuu onnee fi sammuun fayyaa ti. Namni qaama hir`u keessumaa kan akka koo kiraanchiin socho`u fi kana irratti immoo ‘torture’ ta’ee baayyee miidhamee jiru dhuguma mana hidhaa eegumsa guddaa qabu (Qaallittii) cabsee fiigee bahaa?
Egaa kunoo sababii akkasii natti maxxansaniitu rasaasaan bakkan ciisee jirutti na tumani. Rasaasni wayyaanee kun Sadaasa 03, 2005 mana hidhaa keessatti dheensee jiru urtee tiruu hulluuqxee, kiranchii foloqsitee, lafee cinaachaan na seentee, kalee koo buruqsite. Dhiigni keessa kiyyaatti yoo cobu natti dhagahama. Maaloo daddaffiin lubboo koo na keeessaa baasaa, naa fixaa jedheen iyyadhe. Eenyutu na dhagaha. Warri silaa kana dhagahuu malehoo warra dhiphuu kana natti fideedha. Afuuffeen koo dhiitoftee fincaan qabattee na dhikkifatti. Na ittansa.
Dhiigni mata kiyya keessa faca`aa jira. Miilli koo afaan boollaa, cinaachi koo sireerra, lubbuu harka Waaqaa godheen isinitti himachaa jira. Barootan jiraadha jedheen umrii lakkaawachaa jira otoo hintaane, lilmee “glucose” harkatti na jirtu takkaawu gadi copdee dhiiga ol-deebistutti ija diree yaadaan samii gahee deebi`aa jira. Haala akkasii keessa taa`een dhaammadha.” jedhee darbe.
Har’a Alamaayyoon darbus seenaan isaa akka Tulluu Joorgoo boonee mul’ata. Dhaamsi isaas golee Oromiyaa mara keessaa qillisaa jira. Qeerroon diddaa finiinsaa jiranis, galmee seenaa keessaa dhaamsa Alamaayyoo dubbifachaa qabsoo diddaa sirna abbaa irree finiinsa ajiran. Diinni kalee Alamaayyoo ajjeesee, kijibaan dallaa cabsee bahuuf jennaan ajjeefne, jedhes kunoo yeroon itti qaana’u dhiyaataa jira. Diinni akka yaaddetti, kan akka Alamaayyoo ajjeesuun abdii Qeerroo cabsa seetee turte. Garuu, kun abadan akka hin taane, dhugaatti argaa jiran.
Alamaayyoon du’us, kumaatama akka Alamaayyoo kutatoo fi murattoo ta’an arguun keenya, kaayyoon kufameef sun hagam eebbifamaa akka ta’e mirkaneessa. Duuti isaanis, inumaayyuu, hundee jabinaa ta’uun akka Qeerroon daran jabaatanii diina Oromiyaa irraa buqqisan ta’ee jira. Dhaamsi isaa kan ergaa,”Qeerroo Qabsoo itti Fufaa!” of keessaa qabus Oromiyaan duuba kanneen jiraniif illee madda seexessaa fi jabinaa ta’uun akkuma kalee sanitti fula’uutti jira.
1 thought on “Qeerroo, Qabsoo Itti Fufaa!”
Fincilaa on May 4, 2011 at 7:57 pm said: